My Lucky Star ( 2013 ) - Myanmar Asian TV
တရုတ်ကားလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် 2013 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Action , Romance , Comedy Movie လေး တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ..
ဆိုဖီဟာကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးရတာဝါသနာပါပြီး ရည်းစားလည်းမရှိ သာမာန်ခရီးသွားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးပါ..
အလုပ်မှာလည်းအမြဲတမ်းအတွေးကမ္ဘာထဲမြောနေတတ်လို့ အလုပ်ရှင်ဆီကပါငြိုငြင်ခံရလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့ …
တနေ့မှာတော့ စင်ကာပူခရီးစဉ်အတွက် winner ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အပျော်ခရီးထွက်လာရာကနေ သူမရဲ့ကာတွန်းထဲက Hero နဲ့တူတဲ့ Agentလေးဒေးဗစ် နဲ့ဆုံပါတော့တယ် …
ဒေးဗစ်ကတော့ agent တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစိန်ပျောက်တဲ့ အမှုကိုလိုက်စုံစမ်းနေတာပါ …
ဒေးဗစ် မစ်ရှင်လုပ်နေရတဲ့ Lucky Star စိန်အမှုထဲ ဆိုဖီတစ်ယောက်ဘယ်လို ကြားညှပ်ပါသွားမလဲ ?
အူကြောင်ကြား ဆိုဖီက အမှုကိုကူဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား အရှုပ်တွေလုပ်နေမလား…?
ပြီးတော့ agentလေးကရော ဆိုဖီကို ပြန်ချစ်ပါ့မလား?
ဆိုဖီကရော သူချစ်ရတဲ့agentလေးကို စနှိုက်ကြော်မဆီကနေ ဘယ်လိုပြန်ကာကွယ်ပေးမလဲ ? ဆိုတာ My Lucky Star ဆိုတဲ့ movieလေးကို အားပေးကြည့်ရှူကြပါလို့ …
Actors: Leehom Wang, Ruby Lin, Ryan Zheng Kai, Terri Kwan, Yao Chen, Zhang Ziyi, 蔡少芬
Soliddrive.co Myanmar652 MB Download Openload.co Myanmar652 MB Download